Indlu yaseCockleshell Beach
Indlu eqhelekileyo yokuzenzela ukutya, kwindawo yabucala yoLondolozo lweNdalo ekwiikhilomitha ezingama-55 ukusuka eKapa. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngabantu abasi-8. Ikhaya libonelela ngembono ephanayo yolwandle kunye neFynbos yoNxweme lwaseNtshona Koloni
I-Cockleshell Beach House yindlu eqhelekileyo yokuziphakela, ekwiNdawo yoLondolozo lweNdalo yabucala ekwiikhilomitha ezingama-55 ukusuka eKapa kunye ne-30 km ukusuka kuzo zonke izibonelelo. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze ikwazi ukuhlalisa abantu abasibhozo. Ikhaya libonelela ngembono yepanoramic yolwandle kwaye kukuhamba okufutshane ukuya elunxwemeni lwabucala.
Le ndlu yaselwandle ikhululekile kakhulu, inendawo enkulu evulekileyo yokuhlala. Kukho amagumbi okulala amane lilinye linegumbi lokuhlambela leen-suite. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba ovumela ukuba kube lula ukuzityisa. Indawo ebanzi egqunyiweyo inendawo yebraai (ibarbecue), ejongene nolwandle kunye nolondolozo lwendalo.
Indawo ezolileyo ifanelekile kubathandi bendalo. Iindlela zokuhamba, ubomi beentaka ezixhaphakileyo, ukubona iminenga, ukujonga iinkwenkwezi esibhakabhakeni sasebusuku esingangcoliswanga kunye neentyatyambo zasendle ezinomtsalane entlakohlaza zezinye zezinto ezinomtsalane kule ndawo ikhethekileyo nekhethekileyo.
Ukhuseleko lwendalo yolondolozo lwendalo kunye noNxweme lwaseNtshona Koloni olunombono ovulekileyo wolwandle ongqongwe yiCapes Fauna and Flora
Ndilapha ukukunceda ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho eCockleshell Beach House